The eziokwu banyere Lucia.
Lucia bụ a Catholic senti onye ọtụtụ ofufe December. Tinyere ihe ndị ọzọ na ha dị iche iche Lucia ụgbọ okporo ígwè, ma na chọọchị dị iche iche na ego ebube.
Saffron The nwamba aha ya bụ "Solbröd". "Saffron Bread" si n'aka "Lucia" na pụtara "lucifa nwunye ọhụrụ." Lucifa bụ a aha maka ekwensu. Na ndị ọzọ okwu, ọ pụtara "Ekwensu Bride".
Chee echiche banyere ya mgbe ụmụ agbọghọ na ndị inyom meworo okenye na-eji ejiji dị ka Lucia na kandụl na ntutu isi ya. Ọ bụ onye na ha n'ezie na-eji ejiji dị ka? Ọ bụkwa onye na ha akwado?
Mgbe ndị mmadụ na-abụ abụ ma na-akpọsa na ọ bụ Lucia onye na-eweta ìhè ha dochie ya na Jesus. Ọ ghọọ onye na-emegide Kraịst bụ, kama Jesus.
N'ihi na ọ bụ Jizọs bụ onye n'ezie na-eweta ezi Ìhè! Ọ bụ ya ka anyị ga-eto ma na-efe ofufe. Ọ bụghị a nwụrụ anwụ "ndị nsọ" bụ ndị na-anwụ n'ihi na ọtụtụ afọ.
na-ekpere arụsị si malite
Omenala nke adia Lucia bụ site a na-ekpere arụsị si malite.
The Catholic Church "Kraịst" na-ekpere arụsị Lucia ememe na mmalite usọrọ Saint Lucia. Ma na-eme ememe a senti bụ n'ezie dokwara ihe ọjọọ!
Lucia ka e mee ememme ogologo n'ime Nordic obodo
"Lucia" ma ọ bụ "Saffron", nke pụtara "Ìhè," ka e mee ememme ke Sweden ma ọ bụ Nordic mba n'ihi na ogologo.
Ọ bụ na 1700s na ha malitere usọrọ Saint Lucia - tupu ọ fọrọ nke nta kpamkpam na-amaghị ama.
Ma midwinter e-eme ememe n'ihi na ogologo, na dị ka onye nnọchiteanya nke dises ma ọ bụ nwaanyị na-echebe chi, ghọrọ "Lucias" ọgụgụ okpono na otuto.
Nke a mere na Midwinter Day na 13 December.
Prokopios nke "Lucia usọrọ"
Ihe odide kasị ochie akụkọ nke "Lucia usọrọ" sitere Prokopios, dị ka 500 si ala Greece dere banyere "Ultima Thule".
"Ma mgbe ubọchi iri nọgidere nke ndu ebighi-abali, arịgo a ozi na otu n'ime ugwu ndị dị elu, nke na-na a n'akụkụ, na ebe ọ na-ọkụ akpatre a bonfire, ka ndị dị iche iche na-ebi ndụ Dalarna n'okpuru, ọ hụrụ anyanwụ na-ebili n'ebe dị anya, na 40-ogologo ụbọchị n'abalị ga-adị n'elu. Mgbe ahụ na-inyom ke edere edere ala elu ọwa na kandụl, ka achọ onwe ha mma, na-uwe na-acha ọcha uwe mwụda, na ọ bụrụ na ukwu ha, ha nwere ihe uhie uhie, ma ọ bụ a belt nke ahịhịa. "
The nwanyi ngosi usoro Lussi bụ ndabere nke Lucia.
The etiti oge oyi wee ebe gburugburu December 13 ke emepechabeghị. Mgbe ahụ bibie nwaanyị demo usoro Lussi.
The demon Lussi bụ otú ahụ ezi ihe ndabere nke Lucia. Lucia nke dara na nke iri na atọ nke December na-otu ugboro ọzọ e jikọtara ya na ekwensu aha lucifa karịa na Catholic senti.
The ememe on December 13 bụ agadi, ma aha ahụ na-akpakọrịta na senti Lucia bụ pụtara ọhụrụ.
Lucia na-eme ememe na Sicily. N'ebe ahụ, ha mere ya n'ime a ibé dị ka ọnụ ọgụgụ.
Na Sicily ewe Lucia na-enweta ihe oriri site na ụmụ na aka onyinye n'ihi na ha na o nwere a na-efe efe inyinya-ibu. Puru onye ahụrụ ya na-atụba ya ntụ na onye ihu.
Saffron cat aha esighị n'aka ndị Saint Lucia kama site n'aka ekwensu aha lucifa.
Iji mmenyenjo efep "Saffron" (lucifa - Devil), nwee agba nwoke buns odo na saffron.
The Catholic Church si aghara
Dị na mbụ, ndị Catholic Church weere elu na nkwenkwe ụgha, ndị Kraịst, Ekwensu na ndị mmụọ ọjọọ mgbe ha kere ha nsọ.
Anyị kwesịrị bụghị nsọ ma ọ bụ ndị mmụọ ọjọọ. Anyị kwesịrị Jesus Christ. Ọ bụ naanị Jizọs bụ Ìhè na ọ na-enye anyị ìhè mgbe anyị na-kwere na ya!
Catholic senti - ikpere arụsị
Ha na-efe na ndị nwụrụ anwụ "ndị nsọ" ma ha na-aghọta na ha na-efe na ndị ikpe mara nke ikpere arụsị.
"Ma m na-adịghị efe Lucia!" ekwuwapụta i nwere ike wute. I na-abụ abụ "Santa Lucia" na ụfọdụ ebe?
The aha Lucia na-abịa site n'otu okwu dị ka lucifa - ekwensu. Kwere m, ekwensu ga-ọ bụghị ìhè.
Ma mgbe ndị mmadụ kwuputa na ọ bụ Lucia onye na-eweta ìhè ha dochie ya na Jesus. Ọ ghọọ a antikristlig akara nke kama Jesus.
Eweli Jesus kama. Ọ bụ onye na ìhè nwuo n'ọchịchịrị.
Isaiah 9: 2.The ndị jere ije n'ọchịchịrị ahụwo oké ìhè; na ndị dị ndụ na onyinyo ọnwu obodo ga ìhè pụta.
Jọn 1: 9. Ezi ìhè nke na-enye ìhè, nwoke ọ bula na-abịa n'ime ụwa.
Ẹsabarede na azụmahịa ebube
Lucia na-eme ememe December 13 na Sweden na ụfọdụ mba ndị ọzọ. Lucia na-eme ememe ma na chọọchị dị iche iche, ego na azụmahịa ebube. N'ihi na ọ ọma na-eme ememe ya ego na azụmahịa Ọnọdụ, anyị na-aghọta na ọ bụghị Christian. Ama na ọ kemgbe banyere Jesus Christ ama e pụta ìhè na ndị dị otú ahụ ebube. Lucia nwere abụghị ihe ọ bụla na-eme na Bible na-eme. Ọ bụ a na-adịbeghị anya mepụtara. The akụkọ banyere Lucia bụkwa dịghị na Bible, ma n'ezie na-ekpere arụsị na Come.
Lucia bụ a Catholic senti onye senti 100 afọ mgbe ọnwụ ya. Ọ na e gburu na Syracuse na Sicily na 304. Ọ nọ na ebubo ịbụ a Christian, ma nke a na-atụle ga-a na nnupu isi megide eze ukwu Rom.
E nwere ọtụtụ akụkọ na-emeghị banyere Lucia na ọ bụ ike na-ha iche. Otu bụ na ọ gara na-eri nri ka Rom ala catacombs ebe Kraịst e zoro. Iji hụ ebe ọ gara na ọchịchịrị tunnels, ọ kandụl na isi ya. E nwere omenala mere ụmụ agbọghọ nwere a chandelier mgbe ha na-eche Lucia.
Anya a gbọmgbọm
Ọ na-e sere na ya anya yi a gbọmgbọm. E nwere a akụkọ mgbe na ọ dọwara ya anya a na-ekpere arụsị-isi na-enweghị ike ịlụ ya. Mgbe ọ na-eto si ọhụrụ na mma anya na ya.
Na Catholic ụwa, ọ anya-echebe na Ophthalmologicals kpọkuru aha-ya. Lucia bụkwa nchebe senti nke Syracuse.
Ìhè ke ntutu
On December 13, mgbe ahụ, na-emekarị Lucia eweta ìhè n'ime ntutu isi, ma ọ bụghị na ọ na-eweta na ìhè, ọ bụ Jizọs. Na ọ bụghị nanị na-abịa na ìhè - ọ bụ ya bụ Ìhè. Ọ dị mkpa ka anyị na-adịghị eme ihe ndị na-anapụ anyị anya site Jesus.
The aha Lucia si Lux, nke pụtara ìhè. Rịba ama myirịta na lucifa, onye bụ a aha nke ekwensu!
Ọzọ akụkọ bụ na Lucia m kwere Chineke nkwa agaghị alụ di. Mgbe otu nwa okorobịa ike ịlụ ya, o gosiri ya maka Emperor na Rome na ọ bụ a Christian.
Ọ na ikpe amanye ọrụ a akwụna. Mgbe ha bịara ozi kpọtara ya, ha nwere ike iwe ya. Mgbe ahụ, ha gbalịrị kpọọ ya ọkụ n'elu osisi, ma mgbe ọ na-emezughị isi ha ya. The red gbalaga gburugburu Lucia si n'úkwù bụ ihe nnọchianya nke ọbara ya na-asọpụta.
Na Nordic region, anyị bụ nnọọ naanị usọrọ Lucia na anyị kpụ ọkụ n'ọnụ ụzọ. Ma, e nwere omenala na akụkụ ụfọdụ nke Italy. Onyinye na-ekesa na-Verona ụmụ na Lucia Day na ebe nchekwa nke Lucia echebe ha si 1300s otiti!
Na obodo nke Syracuse eyi ya a izu na edikan a oyiyi na-anọchite anya Lucia narị ole na ole kilos. Ọzọkwa na obodo Amaroni na Calabria ha usọrọ Lucia na a edikan, ma na ụlọ ọrụ ndị ọzọ nke obodo si nchebe senti, Santa Barbara.
O nwere ike iyi na usọrọ Lucia ka ẹkenemede okwukwe nke ndị Kraịst, ma ọ bụ n'ezie ikpe. Ọ dị mma ka a mata na Jizọs dị ka ezi ìhè ahụ ga-abịa n'ụwa ma ọ na-enye ìhè ka mmadụ niile! (Jọn 1: 9)
Ha bụ ihe na-achọ inwe anya gị n'ebe Jizọs mere na ị ga-azọpụta. The Catholic senti bụ onye dị otú ahụ.
Ọ dị mkpa na ị na-adịghị ka ihe ọ bụla na-gị anya Jesus. Ọ bụ naanị Jizọs bụ onye nanị bụ Onyenwe anyị na Onye Nzọpụta!